Kugamuchira Vashanyi kudzokera kuHawaii ne Aloha kune mumwe nemumwe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Kugamuchira Vashanyi kudzokera kuHawaii ne Aloha kune mumwe nemumwe
Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • LGBTQ • nhau • vanhu • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mabhichi, mahotera, zvinokwezva mu Aloha Nyika yeHawaii yave kuda kutambira vashanyi kudzoka kumahombekombe ayo. Nemusi weChina uye mushure memwedzi minomwe yezvibayiro, kushungurudzika, uye kuranga Hawaii inoshanda semuenzaniso uye muenzaniso munyika kana zvasvika pamaitiro ekufamba nekushanya kwekuenda kwakabata denda reCOPVID-7. Vanhu muHawaii vanga vasati vanzwa zvakawanda kubva kune vavo vatsva vatungamiriri vekushanya, iyo CEO weHawaii Tourism Authority. Akangotanga mavhiki apfuura,
Nhasi mukuru weHawaii Tourism Authority akapa hurukuro yemanzwiro isinganzwiki nechero mukuru wezvekushanya munyika kusvika parizvino.
Iyo yekushanya inoenderana nehupfumi mune ino US State iri mune yemahara-kudonha. De Fries haana kuita chakavanzika kubva mune zvakakomba mamiriro eHawaii ari kutarisana nawo.
De Fries anoita kunge akagadzirira kutungamira Hawaii uye akakumbira kune wese munhu kuti ashande achiti kuvhura State kune vashanyi chiitiko chisina kukwana chiri kuurayiwa nevanhu vasina kukwana vane chinhu chimwe chete. Aloha yeHawaii, Aloha kune mumwe nemumwe.
De Fries, uyo akazvarwa uye akakurira muWaikiki, anounza anopfuura makore makumi mana ezviitiko pachiitiko ichi. Iye akamboshanda semukuru maneja weNative Hawaiian Hospitality Association uye mutungamiri uye CEO weHokulia, inzvimbo yekugara yakasarudzika kuHawaii Island. Iye zvakare aimbove akatungamira iro rekutsvagisa nekusimudzira dhipatimendi reRuwa rweHawaii, kwaakashanda kusimudzira hupfumi mune zvekushanya, zvekurima, uye simba rinowedzerwazve.
Mutungamiri uye CEO weHawaii Tourism Authority vakataura naGavhuna Igne nevanhu vemuHawaii nezvekuvhurwa kwehupfumi uye kuvhurwa kweKufamba neKushanya Indasitiri mu Aloha Nyika.
Mamiriro akakwana angadai akave eHurumende yeHawaii nevanhu vayo, kuti vanyatsobaiwa jekiseni. Izvo zvaizove zvakavimbisa kuchengetedzeka uye hutano hwevose. Mamiriro ezvinhu akakwana, zvisinei, haasi echokwadi.
Uye isu zviripachena hatina kugona kuzviita. Uye saka ese mamiriro akapfupika pane iwo anotaridzika uye anonzwa asina kukwana. Iko kune yakasarudzika polarity pakati peayo ari pro-bhizinesi neaya ari kumhiri kunopindirana kwetambo. Saka kuzivisa kwese, sarudzo dzese dzinoitwa nagavhuna uye nemameya mashanu nenzira yakati, dzinofamba dzichidzika nekudzoka pakati peiyo polarity. Zvisinei chiziviso ichi chakaziviswa nemukuru wehurumende, uye pane zvisarudzo zvekuremekedza zviri kuitwa nekutaurirana nevatungamiriri vana vematunhu edu.
Panguva iyoyo nenguva, ibasa rangu kuenzanisa Hawaii Tourism Authority neindasitiri yedu zvachose, nezvisarudzo izvi, izvo panguva ino zvinoda kuvhurwa, kutangazve kwekufamba pachena muna Gumiguru 15.
Ikozvino mukati meindasitiri, zviri pachena kuti kune zvakawanda zvekunakidzwa. Vanhu vakafutunurwa munaKurume vari kudzoka panguva ino. Uye mumavhiki maviri apfuura, vachigadziriswa mumabasa avo,. Zvisinei, izvo hazvisi kuitika nekukurumidza zvakakwana. Izvo hazvisi kuitika kazhinji zvakakwana uye hazvisi kuitika padanho hombe. Mamwe mabhizinesi acharamba akavharwa panguva ino. Vamwe vakafambisira mberi kugadzirisa kwavo kwakarongedzerwa kusimudza kubva kubva muna 2021 kusvika muna 2022.
Aya ndiwo sarudzo ayo ega ega emahotera aya uye mabhizinesi emabhizinesi akasununguka kuita. Nekudaro, isu tinovimbiswa kuti kuchave nekukwana kweyekuverengera kubata nemigwagwa inotarisirwa pakati paGumiguru na15 nemwaka wezororo mukupera kwegore.
Zviripachena, kune yakawanda mufaro mune iyo indasitiri. Uku kutarisira kwave kuvaka kwechinguva, asi ini ndichawedzerawo kuti kune huwandu hwakawanda hwekushushikana, kutya kwevanhu vasingazivikanwe vachidzokera kubasa risiri iro chaizvo basa ravakasiya kumashure munaKurume.
Iwe unogona kunge wakambondinzwa ndichitaura izvi zvisati zvaitika, asi kana iwe uri bhero, pawakabviswa hura munaKurume pawakadzokera kune iro dhipatimendi rebhero, chiteshi icho, iko kushanda kwebasa ikozvino kuchange kune echelon yehutsanana sterilization muhutsanana izvo isu tisina yakaonekwa muindasitiri pamberi. Maitiro, anoenzana nezvatakaona mumakiriniki uye zvipatara. Pamusoro peizvozvo, zvaizodikanwa semubhero kuti azive zvizere mumitemo mitsva yese yehutano.
Meseji yangu inoenda kuneavo vari mune vakuru manejimendi, manejimendi manejimendi, pamwe nevaya venyu vari kumberi, mitsara yekutaurirana inofanira kunge isina kumboitika.
Mitsara yekutaurirana uye kunzwisisa inofanirwa kuzadzwa nekujeka. Kana iwe uri kushanda mune rimwe remadhipatimendi, ingave iri yendege, pasi, chekufambisa, hotera, resitorendi, kana zviitiko, kana paine kusahadzika mupfungwa dzako, unofanirwa kubvunza mibvunzo uye unofanirwa kuunza kujekesa kwechiratidzo ku iko kuvhiya. Kupfuura zvese, isu tichafanirwa kudzidza nzira yekuwana kuvimba kweumwe neumwe. Sezvatinofambira mberi,.
Nhungamiro nezvirongwa zvakaiswa. Mazhinji acho nenyika, pamwe nemasangano emunharaunda emabhizimusi.
Sezvo isu tichifamba kuburikidza neizvi, hapana chinopera musi waGumiguru 15. Zvese zvinhu zvinotanga nekuti pachave neyakagara mamiriro ekugadziridzwa. Maminitsi mashanu apfuura.
Ndichangoburuka parunhare nemumwe wevafambisi vengarava paHokule'a, uyo akandiyeuchidza kuti kana iwe uchibva padanho rimwe kubva kuHawaii uchienda kuTahiti, kunze kwekunge wagadzirisa degree iri, unogona kuzopedzisira mamaira makumi mashanu kubva kuChitsuwa chauri kutsvaga. Enda ku.
Zviri pachena kuti tiri panguva isina kukwana. Iwe unogona kuti isu tiri imwe degree kure kana kupfuura, asi mwedzi mishoma inotevera nemakore ari kuzove akateedzana ehe, gadziriso dzinofanirwa kuitwa.
Imi mose munoziva nezveAla Moana Shopping Center. Fungidzira pane rakabatikana vhiki rezororo, kuti ese mashanu mafurati akazadzwa nevanhu uye uku kudonha kwehupfumi. Ini ndoda kuti iwe ufungidzire kuti iyo yese yekutenga-nzvimbo yekuvakira yakangodonhera pairi pachayo, ese mashanu mashanu pasi. Uye wakaita kuti vanhu vabatike pasi. Une vanhu vanotambura. Une mabhizinesi akafa. Ini ndoda kuti iwe utore iwo ma12 acres enzvimbo yekutengesa akawedzeredzwa kune ese eOahu uye wozowedzera kune iyo yese nyika yeHawaii.
Kudonha kwehupfumi uku ndiko kwatisati tarova pasi izvozvi. Isu tiri munzvimbo yekusununguka.
Sezvatinotaura, iwe unowedzera icho chifananidzo cheichi chivakwa chakapunzika. Ichi chifananidzo chinosanganisira mhuri dzine vana, nevakuru, vane kupuna vakasungwa, uye kana tichivasiya ipapo, ndipo patinoisa njodzi zvakanyanya.
Aya mamiriro asina kukwana ari kuitwa nevanhu vasina kukwana vane chinhu chimwe chakafanana, Aloha yeHawaii, Aloha kune mumwe nemumwe.
Uye tinoda kubatirira pane iyo, mweya iwoyo patinoenda neizvi.
Uye kunyangwe iwe usinga bvumirane nesarudzo idzi dziri kuitwa nekuti unogona kunge wakanamatira mukushoropodza kwako, unofanirwa kutsigirana, nekuti kutsoropodza munharaunda ino kuri kufamba nekukurumidza senge hutachiona, uye zvinomira.
Tinofanira kugadzira hunhu hwakanaka kutsigira vatungamiriri vedu, vatungamiriri vetsika, uye nekuvatungamira nekuratidza hutungamiriri zvinodiwa munharaunda.
Panguva ino, isu tinofanirwa kuzvipira kugadzikisa iyo curve zvachose. Hapana mumwe wedu achagadzira mushonga, asi pane zvinhu zvitatu zvatinotonga, kupfeka chifukidziro, kuremara munharaunda, uye nekuona kukura kwemapoka atinounganidza. Ndidzo zvinhu zvatinotonga. Ndatenda.
kushanya www.jaiicovid19.com kuti uwane zvimwe nezve izvo zvinodikanwa zvekushanyira iyo Aloha Nyika yeHawaii.
Vashanyi vakagadzirira kutevedzera chikumbiro cheHawaii chekuremekedza mirau yemuno vanogona kuwana iyo Yakachengeteka Tourism Pass yeVafambi nekuvakazve.travel